गोरखामा जोगी र भैंसीजस्तै माओवादी र नयाँ शक्ति ! | रेडियो भरतपुर – Radio Bharatpur
Home फोटो ग्यालरी गोरखामा जोगी र भैंसीजस्तै माओवादी र नयाँ शक्ति !
गोरखामा जोगी र भैंसीजस्तै माओवादी र नयाँ शक्ति !
on: २०७४ बैशाख १०, आईतवार ०८:३४ In: फोटो ग्यालरी, मुख्य समाचार, राष्ट्रिय, समाचार
१० बैशाख, गोरखा । नेपालीमा एउटा उखान छ- ‘जोगी देखेर भैंसी डराउँछ, भैंसी देखेर जोगी डराउँछ ।’ डा. बाबुराम भट्टराईको गृह जिल्ला गोरखामा माओवादी र नयाँ शक्तिको सम्बन्ध जोगी र भैंसीजस्तै देखिएको छ ।
माओवादीलाई हराउन नयाँ शक्ति र नयाँ शक्तिलाई हराउन माओवादी केन्द्र पर्याप्त हुने भएकाले यसैको वीचबाट कांग्रेस र एमाले जीत निकाल्ने दाउमा छन् ।
पालुङटारः बाबुरामको प्रतिष्ठा
साविक पालुङटार नगरपालिकामा ४ गाविसहरू पालुङटार, गाईखुर, च्याङली, आँपपिपल रहेका थिए । स्थानीय तह पुर्नसंरचना आयोगले थप ३ गाविसहरु मिरकोट, धुँवाकोट र खोप्लाङ थप गरिदिएको हो ।
यस नगरपालिकामा मतदाता संख्या २६ हजार छ । ०५६ सम्म कांग्रेसको प्रभाव क्षेत्रमारूपमा रहे पनि ०६४ र ०७० सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीका उम्मेदवारहरुले जिल्लाका ३ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा विपक्षीहरुलाई भारी मतले पछाडि पार्दै जितेका थिए ।
नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईको जन्मस्थल रहेको गोरखा पालुङटार नगरपालिकामा स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी र नयाँशक्तिका बीचमा तीब्र प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ ।
पालुङटारमा बाबुरामको नयाँ शक्तिबाट मेयरमा भवानी उच्च माविबाट हालै ‘रिर्टायड’ भएका शिक्षक उमाकान्त देवकोटा, अशोक देवकोटा र तेजु गिरी तथा उपमेयरमा दुर्गा न्यौपाने भट्टराई र नारायणी अधिकारीको नाम चर्चामा छ ।
त्यसैगरी माओवादी केन्द्रबाट खोपबहादुर कँडेल, गुणराज देवकोटा विवश चिन्तन र लोकनाथ बगालेको नाम चर्चामा छ ।
कांग्रेसबाट नारायण गुरूङ, दीपक कँडेलमध्ये एकजनाले टिकट पाउने सम्भावना छ । यस्तै कांग्रेसबाट उपमेयरमा कमला देवकोटा, राधा पन्थी र चेतकुमारी श्रेष्ठ सिफारिसमा पर्ने नाम हुन् ।
पालुङटार नगरपालिकाको मेयरमा एमालेबाट जुद्धबिलास भण्डारीले टिकट पाउने सम्भावना बढी छ । उनी साविक पालुङटार गाविसका अध्यक्ष समेत रहेर काम गरेका व्यक्ति हुन् ।
उनीसँगै मेयरमा नगरकमिटी अध्यक्ष प्रकाश न्यौपाने र ओम बराकोटीको पनि नाम पनि सिफारिस भएको छ । एमालेबाट उपमेयरमा इन्दिरा देवकोटा, सिर्जना कँडेल र सुशीला न्यौपानेको नाम सिफारिस भएको छ ।
०५६ सालसम्म कांग्रेसको चुनावी आधार इलाका जस्तै रहेको गोरखा जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नः २ अन्तर्गत पालुङटार नगरपालिका पर्छ । १० वटा वडा भएको पालुङटार नगरपालिका गोरखा जिल्लाकै दोस्रो नगरपालिका हो ।
बाबुरामको जन्मघर रहेको खोप्लाङ पालुङटार नगरपालिकामै पर्छ । साविकको खोप्लाङ गाविस हाल पालुङटार नगरपालिकामा गाभिएर वडा नं १ हुन पुगेको छ । पालुङटार नगरपालिकामा साविक पालुङ्टार, धुँवाकोट, गाईखुर, च्याङ्ली, मिरकोट, खोप्लाङ र आँपपिपल मिलेर बनेको छ ।
माओवादी र विषेश गरी बाबुराम भट्टराईको सबैभन्दा राम्रो प्रभाव यसै जिल्लामा छ । डा. बाबुराम भट्टराईले माओवादी पार्टीबाट अलग्गिएर नयाँ शक्ति नेपाल पार्टी गठन गरेपछि त्यसको प्रभाव सबैभन्दा बढी यही जिल्लामा परेको कारण पालुङटार नगरपालिकामा आफूहरूले जित्ने भन्दै कांग्रेस र एमाले हौसिएका छन् ।
बाबुरामको प्रभाव क्षेत्र भएका कारण पनि अन्यत्र जस्तो माओवादी केन्द्रलाई पालुङटारमा सजिलो छैन । बाबुरामले आधाआधी बनाएर पार्टी फुटाएको जस्तै प्रभाव गोरखामा देखिन्छ । ०७० सालको संविधान सभाको निर्वाचनमा भारी मतान्तरले जितेका पूर्व स्थानिय बिकासमन्त्री हितराज पाण्डेको क्षेत्रमा पर्ने पालुङटार नगरपालिकामा यसपटक एमाले र कांग्रेसले आ-आफूले जित्ने दाबी गरेका छन् । ०५४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पालुङटार नगरपालिकामा मिसिएका साविकका गाविसहरूमध्ये पालुङटार, गाईखुर, च्याङ्ली, मिरकोटमा एमालेले अध्यक्षसहित अधिकांश पदहरू जितेको थियो । धुँवाकोटमा राप्रपा र खोप्लाङमा कांग्रेसले जितेका थिए ।
आँपपिपलमा उपाध्यक्ष जितेको एमाले ०६४ मा भएको संविधान सभा निर्वाचनमा गोरखा निर्वाचन क्षेत्र नः २ बाट जमानत मात्रै जोगाउन सफल भएको थियो ।
गोरखामा एमालेको संगठन माओवादीको प्रभावका कारण क्षतविक्षत बनेको थियो । यसपटक विगतमा गुमेको बिरासत फर्काउने दाउँमा एमाले छ । यस्तै कांग्रेस पनि २०५१ र २०५६ साललाई फर्काउने जमर्कोमा छ ।
कांग्रेसले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा, गगन थापा सहितका नेताहरुलाई झिकाएर गत फाल्गुण १ गते पालुङ्टारमा आमसभा समेत गरिसकेको छ । माओवादी र नयाँ शक्तिको टकरावका कारण उनीहरूमा उत्साह जागेको छ ।
निर्वाचन चुनाव चिन्ह सम्वन्धी विवादका कारण नयाँ शक्तिले चुनावमा भाग लिने नलिने अझै ठोस निर्णय नगरे पनि पालुङटारमा आन्तरिक चुनावी तयारी गरिरहेको छ । डा. बाबुराम भट्टराईको उपस्थितिमा नयाँशक्तिले शनिबार पालुङ्टारमा शक्ति प्रदर्शन गरेको छ ।
नयाँ शक्ति र माओवादी केन्द्रको तानातानका वीचमा कांग्रेस वा एमालेमध्ये एकले पालुङटार नगरपालिकामा जित्न सक्ने दाबी गरेका छन् । वामपन्थीहरुको भोट विभाजित हुने भएकाले कांग्रेसको पल्ला भारी हुने स्थानीय कांग्रेसका नेता दीपक कँडेल बताउँछन् ।
नयाँ शक्तिले पालुङटारमा पराजय भोगेमा डा. बाबुराम भट्टराईलाई आफ्नै क्षेत्रमा झड्का लाग्न र देशब्यापी रुपमा नराम्रो सन्देश जाने भएकाले पनि बाबुरामले पालुङ्टारलाई प्रतिष्ठाको बिषय बनाएका छन् ।
शनिबार पालुङटारमा आयोजित जनप्रदर्शनपछि डा भट्टराईले फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै भनेका छन्- पुराना शक्ति बाईबाई, नयाँ शक्ति हाईहाई !
श्रोतः अनलाइन खबर
चितवनमा माओवादी केन्द्रले ढुङ्गो लगायो आफ्नो उम्मेदवार
भरतपुर महानगरपालिकामा मेयरको उम्मेद्वार प्रचण्ड पुत्री रेणु सिफारिस